Home / समाचार / तपाइको रिसाउने बानी छ ? चिनीको प्रयोगले यसरी गर्न सकिन्छ रिस कम
तपाइको रिसाउने बानी छ ? चिनीको प्रयोगले यसरी गर्न सकिन्छ रिस कम 0
गुलियो स्वाद मन पराउनेले विभिन्न परिकारमा चिनी प्रयोग गर्छन् । चिनीको मिठासबारे कुरा गरिराख्नै परेन । वैज्ञानिकहरूले एउटा यस्तो दाबी पनि गरेका छन् कि, चिनीले रिस कम गर्न भूमिका खेल्छ ।
चिनी खाँदा जिब्रोमा जति मिठास उत्पन्न हुन्छ, त्यति नै तनाव अन्त्य गरेर मीठो प्रतिफल पनि प्राप्त हुने लन्डन युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् । उनीहरूले अनुसन्धानपछि दाबी गरेका छन् कि, चिनीले रिस अन्त्य गरेर दिमाग शान्त र रोमान्टिक बनाउन मद्दत गर्छ ।नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
उनीहरूका अनुसार मस्तिष्कको एक हिस्साले हरेक कुराको निर्णय लिने र आक्रोश नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ र चिनीले मस्तिष्कको उही हिस्सालाई ऊर्जा दिएर सक्रिय बनाउँछ । कैयौँ पुरुष र महिलालाई दुई समूह बनाएर यो अनुसन्धानमा सहभागी गराइएको थियो ।
एक समूहलाई चिनी राखिएको कागती पानी र अर्को समूहलाई कृत्रिम मिठासयुक्त परिकार खान दिइएको थियो । शोधकर्ताले भनेका छन्, चिनी मिसाइएको कागती पानी पिउनेको दिमाग अर्को समूहको तुलनामा केहीबेरमै शान्त र रोमान्टिक पाइएको थियो ।